peacepokhara – Page 1014 – Peacepokhara.com
peacepokhara 11062 Article
११ औं लेखनाथ महोत्सब आजदेखि
गोकुल बानियाँ, पोखरा १८ मंसिर । कास्कीको लेखनाथमा आजदेखि ११ औं लेखनाथ महोत्सब सुरु हुदैछ । लेखनाथ –१ भण्डारढिक स्थित प्रस्ताबित रंगशालामा मंसिर २९ गते सम्म सञ्चालन हुने महोत्सबको नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । महोत्सब उद्घाटनको अबसरमा सय भन्दा बढी संघसंस्थाहरु आ–आफ्नो सास्कृतिक झाकी सहित ... Read More »
उत्कृष्ट आविष्कारको सूचिमा सेल्फी लौरो !
सेल्फी खिच्नेहरुका लागि सेल्फी स्टिक पछिल्लो समयमा रोजाइमा परेको छ । आफुले चाहेको एंगलबाट आफ्नो सेल्फी खिच्ने धोको पूरा गर्नका लागि स्मार्टफोनलाई अठ्याउने सेल्फी लौरो सेल्फीका क्रेजीहरुको रोजाइमा परेरै होला यो सामान्य लठ्ठीले विश्वको उत्कृष्ट आविष्कारको सूचिमा आफुलाई उभ्याउन सफल भएको छ । प्रसिद्ध टाइम म्यागेजिनले सार्वजनिक गरेको ‘सन् २०१४ ... Read More »
२२ विश्वविद्यालय खोल्न आवेदन, एउटै जिल्लाबाट तीनवटासम्म माग
काठमाडौं १८ मंसिर । नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न शिक्षा मन्त्रालयमा आवेदनका चाङ लागेका छन् । हाल नौ विश्वविद्यालय सञ्चालमा र तीनवटा स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन् । थप २२ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा आवेदन परेका हुन् । सञ्चालनमा रहेका तथा स्थापनाको प्रक्रियामा रहेका विश्वविद्यालय सहर र तराईकेन्द्रित छन् । नयाँ स्थापनाका लागि ... Read More »
फाराम नभर्ने विद्यालय एसएलसीबाट बञ्चित
काठमाडौं १८ मंसिर । आगामी मंसिर मसान्तसम्म एसएलसी परीक्षाको फाराम नभर्ने विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई परीक्षामा समावेश नगराइने भएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले निजी शैक्षिक संस्थाले परीक्षाका लागि फाराम भर्न पटक– पटक निर्देशन दिए पनि अटेर गरेपछि मंसिर अन्तिमसम्म फर्म नभर्ने परीक्षार्थी तथा विद्यालयलाई सहभागी नगराउने जनाएको हो । ... Read More »
पत्रकारिता पत्रकार र पेशा
peacepokhara 03 Dec 20140Views
पत्रकार महासंघ कास्कीको कार्यालय अघिल्तिर पत्रकार हरि पन्त यस्तो अवस्थामा भेटिए । मोटर साइकल भरी ६ वटा ठुला ठुला ब्याग बाँधेका उनी ब्यापार गर्न निस्किएका रहेछन् । झट्ट मलाई विश्वास लागेन । पसलकी दिदीले विश्वस्त तुल्याईन । ‘दिउसो काम गर्ने एउटा पत्रिका बन्द भयो, जिविका धान्नै पर्यो, मैले त ब्यापार ... Read More »
पोखरा १७ मंसिर । पोखरामा हतियारधारी ब्यक्तिहरुको जगजगरी बढ्दै गएको छ । हतियार सहित कास्की प्रहरीले लगातार मानिस पक्राउ गर्ने क्रम जारी छ । न्यूरोडको मेघा सहकारी लुटपाट घटनाका मुख्य योजनाकार हतियार सहित पक्राउ गरी सार्बजनिक गरेको कास्की प्रहरीले हतियार सहित पुन दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । सर्लाही शासापुर ... Read More »
नेपाल २९ नम्बरका साथ ‘भ्रष्टाचारग्रस्त’ मुलुक (सूचीसहित)
काठमाडौं १७ मंसिर । ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१४’मा नेपाल भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकमा परेको छ । बुधबार सार्वजनिक सूचकांकमा नेपालमा भ्रटाचार नियन्त्रण हुन नसकेको मात्र होइन, थप बढेको देखाइएको छ । अध्ययनअनुसार नेपाल २९ अंकका साथ १२६ औं स्थानमा छ । १०० कुल अंकको अध्ययनमा १७५ देश सामेल ... Read More »
पोखरा म्याराथनले निरन्तरता पाउने, फागुनको दोस्रो साता म्याराथन हुने
फाईल फोटो पोखरा १७ ... Read More »
Previous Page«‹10121013101410151016›»Next Page